IShedi Yenkomo (Bridgnorth) Iimboniselo ezintle - I-Airbnb
IShedi Yenkomo (Bridgnorth) Iimboniselo ezintle
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguSamantha
Uguqulo oluhle lwezibaya lubekwe kwindawo entle yaseShropshire emaphandleni kodwa yimizuzu nje eli-15 uhamba ukusuka kwimbali yaseBridgnorth kwidolophu yaseSitalato esiphakamileyo.
Ipropathi iguqulelwe kwindawo ephezulu ngabanini bayo kwaye iqhayisa ngentendelezo yayo kunye negadi yangasese yabucala engasemva enembono kumabala avulekileyo anesango elikhuselekileyo lokupaka isithuthi esinye.
Umtsalane waseBridgnorth ubandakanya uMlambo iSevern, umzila kaloliwe oshushu, iCliff Valley Railway ekuphela kwendlela kaloliwe yokuzonwabisa engaphakathi, edibanisa idolophu ephantsi nephezulu.
Ukufikelela kwinqanaba elithe tyaba kwipropati
Zininzi ii-pubs ezigqwesileyo kunye neeresityu ngaphakathi kweBridgnorth uluhlu lwazo olunokufumaneka ngaphakathi kwendawo yokuhlala. I-Cow Shed sisiseko esingathandekiyo sokukhenketha eShropshire kunye nokuhamba okugqwesileyo kunye neendlela zokujikeleza emnyango.
I-Cow Shed yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlola iShropshire. I-Ironbridge Gorge eyindawo yelifa lehlabathi ikumgama nje wemizuzu eli-15 ukubaleka, njengeMuch Wenlock indawo yokuzalwa yeeOlimpiki zanamhlanje. I-Shrewsbury yezeMbali yimizuzu engama-30 yokuqhuba iqhayisa ngezakhiwo ezidwelisiweyo ezingama-600 kunye nendawo awazalelwa kuyo uCharles Darwin. I-Ludlow, eyonwabela i-gastronomic kunye neendawo zokutyela zaseMichelin zinkwenkwezi. Imizuzu engama-45 kude kwaye likhaya kwikhosi yomdyarho ogqwesileyo weSizwe.
UMichael noSamantha bafumaneka ngokubanzi ukukunceda kunye nokuxhasa ukuhlala kwakho kodwa kuphela ukuba uyasifuna njengoko sihlonipha ubumfihlo bakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bridgnorth, Shropshire